ताजा समाचार Archives - Page2of 58 - Gaunbeshi
सुनको कपमा ड्रिंक गर्ने विश्वकै सबैभन्दा धनी एथ्लेटिक, जसको सम्पत्ती करोडौ छ
काठमाडौं । मानिसहरुले पैसा कमाउन कै लागि कडा मिहेनत गरेर काम गर्ने गर्छन् । कुनै मानिसलाई दिनभर काम गरेर दुई छाक खान पनि समस्या पर्छ । तर कुनै मानिस थोरै मिहेनतले धेरै कमाउने पनि हुन्छन् । यस्तै एक मानिस जसले थोरै मिहेनतले धेरै पैसा जम्मा गरेका छन् । तपाईलाई थाहाँ छ, फ्लोयड मेभेदरले थोरै मिहेनतमा […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:५१ Author Gaunbeshi Comment(0)
मस्को। रुसमा कोरोना बाट थप ११ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ५३४ जना सङ्क्रमित भएका हुन् यो सङ्ख्या अघिल्लो दिनको भन्दा बढी हो । अघिल्लो दिन ११ हजार ८७ जना सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ । योसँगै रुसमा शनिबारसम्म कुल सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या ४२ लाख […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:१६ Author Gaunbeshi Comment(0)
डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् !
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधान विघटनको निर्णय असंवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि अब नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल सुरु भएको छ । आन्दोलनरत नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समुहले सरकार गठनको लागि सबै पार्टीका नेताहरुसंग छलफल सुरु गरेका हुन् । यसै क्रममा प्रचण्ड माधव नेपालले बुढानिलकण्ठ पुगेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:०३ Author Gaunbeshi Comment(0)
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार मुम्बई प्रहरी क्राइम ब्रान्चको युनिटले नक्कली इमेल आइडी मामिलामा सन् २०१६ को ऊजुरीको सिलसिलामा बयान दर्ता गर्नका लागि उनलाई पत्र पठाएको थियो । वास्तवमा सन् २०१६ मा ऋतिक रोशनले एक ऊजुरी दर्ता गरेका थिए जसमा उनले कसैले उनको नक्कली आइडी बनाएर कंगनासँग कुरा गरिरहेको थियो । जानकारीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा कंगना […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:५२ Author Gaunbeshi Comment(0)
काठमाडौंमा बर्डफ्लु देखिएपछि, साढे १५ हजार पन्छी नष्ट, पशु विभागले जारी गर्‍यो यस्तो अपिल
काठमाडौ । काठमाडौंमा फेरी वर्डफ्लू देखिएपछि सतर्कता अपनाइएको छ । काठमाडौको तारकेश्वरमा बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि झन्डै साढे १५ हजार पन्छी न ष्ट गरिएको छ । यस अघि पनि तारेश्वरमै वर्डफ्लू देखिएको हो । पशु सेवा विभागले काठमाडौमा वर्डफ्लु देखिएपछि ४ बुँदे अपिल जारी गरेको छ। विभागले शुक्रबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३४ Author Gaunbeshi Comment(0)
राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० एउटै दलका रूपमा छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन्। संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:२३ Author Gaunbeshi Comment(0)
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको छ । महाशाखाले मौसमबारे जानकारी गराउँदै हाल नेपालमा पश्चिमी वायूको आंशिक प्रभाव देखिएको जनाएको छ । हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको रतराइका थोरै स्थानहरुमा हल्का कुहिरो हुस्सु लागेको महाशाखाले जनाएको छ । […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०९:२१ Author Gaunbeshi Comment(0)
ताजा समाचार मनोरञ्जन
काठमाडौं । चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको विवाहको चर्चाबीच नायिका रीमा विश्वकर्माले पनि दोस्रो विवाहको संकेत दिनु भएको छ । विवाह भएको २ बर्षमा डिभोर्स गर्नुभएकी उहाँले फेरि बिहेको कुरा गर्ने बेला भैसकेको बताउनु भएको हो । ‘कमेडी च्याम्पियन २’ प्रशारणको बिषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रीमाले दोस्रो विवाहको विषय उठान गर्नुभयो । संचारकर्मीसँग निकै […]
Posted on १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २०:२० Author Gaunbeshi Comment(0)
बिरामी बोकेको जिप नदिमा खस्योः एकको निधन चार घाइते, घटनामा पर्ने सबै एकै परिवारका
काठमाडौ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ फापरखेतमा बिहीबार राति भएको जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार घाइते भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–३ पात्लेबाट बिरामी लिएर बेनीतर्फ आउँदै गरेको ग१ज ६७८८ नंको जिप सडकबाट म्याग्दी नदीमा खसेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले मालिका–३ का ६२ वर्षीय गोविन्द रोकाको […]
Posted on १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १४:४४ Author Gaunbeshi Comment(0)
उपत्यकामा कोरोना सगै फेरि देखिन थाल्यो नयां रोग
काठमाडौं । काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–१ साङ्लामा फेरि बर्ड फ्लु देखा परेको छ । शंकास्पद क्षेत्रमा बिहिबार परिक्षण गर्दा पुनः बर्डफ्लुको प्रकोप देखा परेको हो । बर्डफ्लुको देखा परेसँगै अहिले सो क्षेत्रमा पालिएका कुखुरा, चल्ला, अण्डा र दाना नष्ट गरिएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ । बर्डफ्लुको देखिएपछि अहिले सो क्षेत्र र वरपरका क्षेत्रहरुमा समेत सचेत गराइएको […]
Posted on १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १३:५३ Author Gaunbeshi Comment(0)
बुंगमतीमा मनाइने जात्रापर्वहरू औपचारिकतामा सीमित राख्ने निर्णय
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:२३ Author Gaunbeshi
Posted on ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:०६ Author Gaunbeshi
आज बुधबार कुन भगवानको पूजा–आरधाना गर्ने ? (पूजा विधिसहित)
Posted on २८ माघ २०७७, बुधबार ०८:४५ Author Gaunbeshi
आर आर क्याम्पसमा नेकपाका दुई पक्षबीच झ ड प, यस्तो छ पछिल्लो अवस्था
Posted on ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १५:५७ Author Gaunbeshi
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने थप एक जना बुटवलबाट पक्राउ
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:३९ Author Gaunbeshi
पहिलोपटक नेपाली सेनामा भयो ब्यापक परिबर्तन, हुने भए यहाँ कार्यरत कर्मचारी खुसि !
Posted on २ फाल्गुन २०७७, आईतवार १०:१४ Author Gaunbeshi